Semalt: Sei Kuziva Black Hat SEO Tactics
Hasha yehangu SEO inongororwa nemitemo yatinoshandisa kuvandudza kushandiswa kwewebsite mu search engine s. Icho chinopesana nemitemo nemamiriro eGoogle, Bing, uye Yahoo. Pane kudaro, chichena chena SEO inzira yakachengeteka uye inokubatsira kuti uwedzere kuvimbika paIndaneti.
Iri izwi rakatangwa mumafirimu eHollywood kuti aparadzanise pakati pomunhu akanaka uye munhu akaipa. Mifananidzo yakaipa inoshandiswa kupfeka zvipfeko dema, apo vanhu vakanaka vaiwanzopfeka zvipfeko chena - black fascinators on a combine.
Michael Brown, uyo anonyanya kutungamira kubva kune Semalt , anovimbisa kuti munguva pfupi yapfuura, hove huru yeSeO yava dambudziko guru kune webmasters. Inowanzoshandiswa nekombiyuta hackers uye spammers. Nenzira iyi, vanokonzera zvinetso kune vimbani webhusaiti, kupamba majaira enyu uye kuita zviito zvisina kukodzera paIndaneti uye pasina.
Zvakakosha kunzwisisa kuti kushandiswa kwemafuro emagetsi ekutsvaga SEO uye mazano angaita kuti webhusaiti yako irambidzwe kubva mitsva yekutsvaga injini. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuwana mhando yepamusoro yemigwagwa uye uchenjerere maitiro matsvuku eSEO chete.
Nhanganyaya kuBlack Hat SEO
Hasha yehangu SEO inzira yakange isingafarirwi nemichina yekutsvaga uye ichiri kushandiswa navazhinji vema webmasters kuti vavandudze nzvimbo dzavo. Aya maitiro haasi maererano nemitemo nemamiriro ezvinhu eGoogle, Yahoo, uye Bing uye haagoni kugutsikana nemigumisiro yakadikanwa yehupenyu hwose. Mazano akawanda uye pfungwa dzakataurwa kuti dzidzivirire webmasters kubva pakushandisa chikwata chetsvuku SEO. Iwe unofanirwa kutarisa maGoogle's Guidelines Guidelines, Bing's Webmaster Guidelines, uye Yahoo's Webmaster Guidelines kuti uve nemafungiro ekutsvaga chikwata chetsva SEO uye kuti ungachira sei. Iwe unofanirwa kudzivisa kubhadhara kutsvaga injini inoita kuti uchengetedze kuchengeteka kwewebsite yako.
Nzira yekuziva sei tsvina yeSeO tactics?
Zvose zvinowanzoitwa SEO maitiro zvinogona kushandiswa kujekesa maitiro ako SEO zvinowanikwa zvinyorwa zvinyorwa, zvinyorwa zvinyorwa, mapeji emasuwo, zvinyorwa zvakavanzika uye zvinyorwa zvekunyorera, kuisa zvinhu zvemashoko makuru, zvisina kunaka SEO, kuudza vapikisi vako pasina zvikonzero, kuendesa mberi, cloaking, link scheme, musenzi asina kuchenjera anyoresa, nekubatanidza kugadzirisa. Uyewo, haufaniri kutarisa zvinyorwa zvako, usasarudza chikwata chekubatanidza nheyo, kufambisa mavhiri, uye mashizha ekubatanidza, uye usapinda snippet markup spamming zvikuru. Zvave zvichiratidzwa kuti kuparadzaniswa kwemashoko, mhinduro yakazvigadzirirwa kuGoogle, kusika subdomain nguva dzose, uye kugadzira mapepa nekutenderera maitiro kunorambidzwa nenjini dzinotsvaga. Iwe haufaniri kupinda mune zvimwe zvinhu zvakadai semavirusi, phishing, malware, neTrojans nokuti zvose izvi chikamu chetsvuku cheSeO.
Kuzivisa chikwata chetsvuku SEO
Kana iwe uri kubatanidzwa mubasa iri, hauzombofi wakawana zvaunoda. Uye kana iwe ukaona mumwe munhu akabatanidzwa muhomwe yeropa SEO, iwe unogona kuudza iyo. Kana iwe usingaregi, webhusaiti yako ingangodaro yakarwiswa kuburikidza nehutachiona husina kunaka, maitiro asina kunaka eSOO, uye nheyo dzema spam. Saka, zvakakosha kuudza kuGoogle kuti ivimbise kutendwa kwewebsite paIndaneti.
Unofanira kudzivisa nyevha yeSeO?
Ichokwadi kuti chikwata chetsvuku SEO chinoita kuti nzvimbo yako ive yakakosha mumigumisiro yekutsvaga injini, asi iyi ndiyo tsika isiri pamutemo uye inogona kuwana nzvimbo yako yakarambidzwa kweupenyu hwose. Pachava nekubudirira kwenguva pfupi kana motokari yako ichiwedzerwa, asi Google inoshandisa zvikwereti zvizhinji kune mamwe mawebsite, uye zvingave zvisingaiti kuti iwe utarisana nemigumisiro inoparadza. Zvinoreva mashizha matsva maitiro eSOO haakodzeri kwauri kana iwe wakanyatsoda kuita bhizimisi kweupenyu hwose.